Maareeyaha Hay'adda Duulimaadyada Somaliland oo ku hawlan burinta Wareegto uu Madaxweynuhu ka soo Saaray Shaqaalihii ka shaqaynayay amniga Madaarka
Thursday 11th October 2018 11:32:58 in Aragtida Dadweynaha
Maareeyaha Hay'adda Duulimaadyada Somaliland oo ku hawlan burinta Wareegto uu Madaxweynuhu ka soo
Saaray Shaqaalihii ka shaqaynayay amniga Madaarka ee Toos loo hoos geeyay Hay'adda Duulimaadyada Somaliland.
Maareeyaha Hay'adda Duulimaadyada Somaliland ayaa doonaya inuu shaqada ka joojiyo shaqaale ku dhow 80 Xubnood kuwaas oo ah Shaqaalihii Madaxweynuhu ka soo saaray Digreetadii uu soo saaray 11-kii Bishii August 2018 kuna amray in si toos ah ay uga hawl galaan iyagoo shaqadoodii wata hay'adda Maamulka Madaarada Somaliland.
Khilaaf lacagtaasi cida qabanaysa ayaa u dhexeeya Maareeyaha Hay'ada Duulimaadyada Somaliland iyo Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda taas oo sida warar xog ogaal ahi sheegayaan markii danbe lagu dhameeyay xarunta Madaxtooyadda iyadoon weli la cadayn halka ay lacagtaasi ku dhacayso.
Sidoo kale, Madaxweynaha Somaliland waxaa uu amar ku bixiyay in shirkadaha gacanta ku hayay goobahaasi lasoo xaqiijiyo dhaqaalaha ay ka heleen muddadii ay gacanta ku hayeen isla markaana shaqaalihii ka shaqaynayay ay sidoodii shaqadooda u wadanayaan kuwana wareegayaan Maamulka hay'ada duulimaadayda Somaliland,Waxayna Wareegtada Madaxweynuhu ku Taariikhaysan tahay 11-kii August 2018.
Wareegtada ka soo baxday Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa nuxurkeeda waxaa lagu go'aamiyay 5 qodob oo kala ah.
3- In Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska, Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda, Hanti-dhawraha Guud, Xisaabiyaha Guud iyo Hay'adda Duulista Hawadu ay keenaan qiimaynta dhabta ah ee dhaqaalaha ay Shirkadaha BOG, SRM iyo EPASS ku maalgaliyeen Haamaha Shidaalka Berbera, amniga Madaarkada Caalamiga ah ee Cigaal iyo baarkinka Madaarka, soona xaqiijiyaan dhaqaalaha ay ka heleen.
4- In Wasaaradaha iyo Hay'adaha ay khusaysaa ka gutaan waajibkooda sharci ee fulinta qodobbadan kor ku xusan.